Global Voices teny Malagasy » Mponin’i Sinaï Mandao Ny Tranony Mandritry Ny Zera Baomba Ataon’ny Tafika Ejiptiana Hamotehana Ny “Mpampihorohoro” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Febroary 2015 5:06 GMT 1	 · Mpanoratra Global Voices MENA Nandika (fr) i Abdelmadjid Mahcene, avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Takelaka be iray napetraka manoloana ny toeram-pisavàna ao Arish, Sinaï, 31 janoary. “Tsy azo idirana, hotifirina ho faty izay rehetra manandrana miditra amin'ity faritra ity”, Loharano: @Cairotoday, Twitter
Raha tsy misy fanamarihana manokana, mitondra mankany amin'ny pejy amin'ny teny Anglisy ny rohy rehetra.
Tonga amin'ny endrika vaovao henjankenjana kokoa ny hamafin'ny fifandonana eo amin'ny tafika Ejiptiana sy ireo vondrona djihadista tao amin'ilay saikinosy ny Alakamisy lasa teo, taorian'ireo andianà fipoahana sy fifampitifirana nahafatesana sivily sy miaramila efa ho maherin'ny 25.
Io no tena fanafihana iray lehibe natao taminà tobin-tafika Ejiptiana hatramin'ny nanonganana ny filoha teo aloha, Morsi. Nampiasa fiara voasesika baomba sy balan-tafondro madinika ireo djihadista teto. “Ny Fanjakàn'i Sinaï”, vondrona djihadista iray izay notondroina tany aloha tany tamin'ny anarana hoe Ansar Bayt Al-Maqdis (ABM), talohan'ny nilazàny ny tokim-panompoany tamin'ny ISIS, no nilaza ho nahavanona ireo fanafihana tao an-tanànan'i Arish, Rafah, ary Sheikh Zuweid tao anaty fanambaràna iray nalefany tao amin'ny kaontiny Twitter  [AR].
Lasibatr'ireo fanafihana ireo toerana fisavàna sy ny toby miaramilan'ny borigady faha-101 tao Arish, ireo toerana fisavàna sy ny toby miaramila tao Sheikh Zuweid, toerana roa fisavàna tao Rafah. Araka ny fanambaràn'ny Fanjakàn'i Sinaï, fiara telo voasesika baomba ary “kamikazy” roa no nampiasaina mba hamelezana ny toby miaramila tao Arish, zato ny fitambaran'ireo djihadista nandray anjara tamin'ny hetsika.
Araka ny voalazan’ Mohamed Sabry  [AR], ejiptiana mpanao gazety monina ao Sinaï, nanomboka nandao ny trano fonenany ireo olona nipetraka teny akaikin'ireo tobin'ny mpitandro filaminana.
تم رصد رحيل بعض الأسر تماما من العمارات السكنية المجاورة للمقرات الأمنية التي تم مهاجمتها والتي تضررت وتضرر ساكنيها بشكل كبير #سيناد 
— Sinaï سيناء (@muhamedsabry) 30 janvier 2015  [AR]
Fianakaviana vitsivitsy no tsinjo, tena voadona tamin'ny zava-nitranga, nandao tanteraka ny trano fonenany, teny akaikin'ilay toby fibaikoana tratry ny fanafihana.
Tao anaty fanambaràna iray nalefa ho an'ny besinimaro taorian'ireo fanafihana  [AR], nanamafy ny mpitondra tenin'ny tafika ejiptiana fa valy bontana tamin'ny fahombiazan'ny tafika sy ny polisy namelezana ireo mpampihorohoro sy ny loharanom-bolan-dry zareo ireo fanafihana ireo.
Ny Filankevitra Ambonin'ny Tafika Ejiptiana Mitam-piadiana (CSFA) kosa dia namoaka ny fanambaràny  [AR] ny ampitson'io. Nohafohezin'i Abdel Fattah el-Sisi ny fitsidihana noho ny vovonamben'ny Firaisambe Afrikana nalehany tao Etiopia  mba hahafahany mivory miaraka amin'ny CSFA ny Sabotsy.
Nanapaka hevitra ny filoha Sisi fa hametraka rafi-pibaikoana vaovao ifampizaràna ho an'ny faritra Atsinanan'ny Lakandrano Suez, sy hametraka izany ho eo ambany fanaraha-mason'ny maréchal Osama Rushdie Askar, araka ny fanambaràna iray avy amin'ny CSFA  [AR] navoaka taorian'ilay fivoriana.
Tao anaty kabariny nalefa fahitalavitra , nahitàna azy nitsangana ary voahodidin'ireo vondronà manamboninahitra, notondroin'ny filoha Sisi ny Firahalahiana Arabo, ilay antoko politika tonga teo amin'ny fitondrana taorian'ny revolisionan'ny 25 Janoary ary voaongana tamin'ny 2013, ho tomponandraikitra tamin'ireny fanafihana ireny, na teo aza ny filazan'ny Fanjakan'i Sinaï fa hoe izy no nanao ny fanafihana.
Ny Fanjakan'i Sinaï, ny ABM, ary ny EI
Ny Fanjakàn'i Sinaï dia vondrona djihadista nantsoina fahiny hoe Ansar Bayt Al-Maqdis (na ABM, izay azo adika tsotsotra hoe “Mpiara-dia amin'i Jerosalema”). Io vondrona io dia efa nanao fanafihana toy ny fanaovana ankasomparana ny fantsona mpitondra entona mampitohy an'i Israely sy Ejipta , nandritry ny fotoana tetezamita naha-teo amin'ny fitondràna ny CSFA, hatramin'ny fanafihana ireo andian-tafika Israeliana mitoby any amin'ny sisintany  nandritry ny fitondràn'i Mohamed Morsi.
Tsy nisy fanafihana voarakitra ho nataon'ny ABM teo anelanelan'ny 3 Janoary 2013, andro nanonganana an'i Mohamed Morsi; sy ny vono olona tao Rabaa, ny 14 aogositra2014, izay mpitolona anjatony mpomba an'i Morsi no namoy ny ainy tao.
Mpikambana niisa efatra avy amin'ny ABM avy eo no maty nandritry ny fanafihana an'habakabaka  ny 10 Aogositra 2014, izay tsy fantatra mazava na ny tafika ejiptiana na Israely no nanao azy io. Ho valifaty, nitifitra bala afomanga ny tanànan'i Eilat any Israëly ny ABM.Teny ampanidinana ny bala afomanga  dia efa voatsenan'ny rafi-piarovana ny habakabaka israeliana.
Nilaza ho tomponantoka taminà fanafihana maro natao tamin'ny tafika ejiptiana ny ABM hatramin'ilay vono olona tao Rabaa, ny fikasàna hamono saingy tsy tanteraka nikendrena an'i Mohamed Ibrahim  [AR], minisitry ny atitany, ny 8 Septambra 2013, ary telo andro taorian'izay, andiana fanafihana tamin'ny baomba tao an-tanànan'i Rafah ao amin'ny sisintany [AR] izay nahafatesana miaramila enina.
Tamin'ny Novambra, tao anaty lahatsary iray nalefa tamin'ny YouTube, nilaza ny ABM fa nanao tokim-panompoana tamin'ny EI . Talohan'io fanambaràna io, efa nitatitra ny Reuters, tamin'ny Septambra, fa misy karazana fifanarahana tsy hay tsy hay izany eo amin'ny EI sy ny ABM .
Ny teo-draharaha ao Sinaï
Tamin'ny Aogositra 2012, taorian'ireo andianà fanafihana nataon'olona tsy fantatra anarana ka nahafatesana marobe avy amin'ny tafi-piarovana Ejiptiana, nanao bemidina iray ny tafika, namelezany ny ABM  sy ireo vondrona mpitolona hafa tao amin'ilay saikinosy. Araka ny lahatsoratra iray tao amin'ny BBC News  ny Novambra 2014, “manamafy ireo mponina fa tsy nasiana fanavahana ny olona tsotra sy ny mpikatroka mafàna fo”, tamin'ny fidinan'ny tafika namoritra ireo vondrona mitam-piadiana tao Sinaï.
Ny vohitr'i al-Lafitat, any avaratra atsinanan'ilay saikinosy, no tena nizaka ny fanimbàn'ny tafika. Ao amin'ny Al-Monitor, tranonkalam-baovao sy fandalinana ao amin'ny faritra, lehlahy iray milaza ny anarany ho Suleiman no manome antsipirihany ny antony mahatonga ny fitomboan'isan'ireo vondrona mitam-piadiana ao Sinaï. “Amin'ny fampihorohoroana no iadian'ny tafika amin'ny mpampihorohoro, na amin'ny famoronana asa fampihorohoroana tsotra izao”, hoy izay manazava, amin'ny fanondroana ireo daroka baomba natao an-jambany tao Al-Lafitat, ilay vohitra nahazo daroka “nihoatra ny zato” tao anatin'ny iray herinandro.
Ankoatra izay, tonga dia nobahanan'ny tafika tsotra izao koa ireo tolotra manome fifandraisana ho an'ny daholobe  nandritry ny hetsika nataony tao Sinaï. Tamin'ny fampitahàna ny fanakendàn'ny tafika ejiptiana ireo fotodrafitrasan-tserasera ireo, toy ny fomba fanao israeliana rehefa manafika an'i Gaza, nanoratra i Wael Abbas, ilay bilaogera manana ny lazany, hoe :
اسرائيل بتضرب غزة لكن سايبالهم الانترنت … سيناء برضه بتنضرب بس كل الاتصالات مقطوعة ومش عارفين ايه اللي بيحصل هناك :(((
— Wael Abbas (@waelabbas) 1er juillet 2014  [AR]
Manafika an'i Gaza i Israëly saingy mamela ny aterineto hiasa kosa . . . Voatafika koa i Sinaï, saingy ny fifandraisana rehetra no notapahana dia tsy hainay izay mitranga any.
Nandritry ny fotoana nitondràny, i Mohamed Morsi filoha teo aloha dia nisafidy ny làlana diplaomatika mba hamahàna ireo olana tao Sinaï. Ny Oktobra 2012, nanao fivoriana hakàna hevitra niarahana tamin'ireo mpitarika isam-poko tao amin'ilay saikinosy izy  [AR] ary nanao lisitra ny fanomezan-toky: ankoatry ny hafa dia hita tao anatiny ny famerenana ny fitsarana ieo mponin'i Sinaï voaheloka nefa tsy niatrika fitsaràna, na ny fametrahana fiantohana araka ny lalàna hahafahan'ireo teraka tao an-toerana mividy tany amin'ny vidiny tsy lafo loatra ao amin'io saikinosy io. Hoy ny Sky News Arabic, in-droa i Morsi no nitsidika an'i Sinaï tao anatin'ny herinandro  [AR], tamin'ny aogositra io taona io ihany (ny fitsidihana faharoa dia taorian'ny fanafihana toby miaramila  nataon'ny vondrona mpitolona, ary nahafatesana miaramila ejiptiana dimy ambinifolo).
Tsy vao ny ampahany voalohany amin'ny herisetra tsy maintsy atrehan'ilay saikinosy akory ny hetsika miaramila misy amin'izao fotoana izao. Faritra fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Azia sy Afrika efa hatramin'ny taona marobe nifandimby, ahitàna vahoaka manodidina ny 550 000 , ilay faritra izay im-betsaka niova tànana . Ny Ampira Ottoman no nifehy an'i Sinaï nanomboka ny 1517 hatramin'ny niafaràn'ny Ady Lehibe Voalohany, tany am-piandohan'ny taonjato faha- 20, napetraka ho eo ambany fiahian'i Ejipta ilay saikinosy.
Votsotra tamin'i Ejipta anefa io faritra io ka lasan'i Israely nandritra ilay adin'ny Enina Andro tamin'ny 1967. Taona enina taorian'izay, nanao andrana fanafihana i Ejipta mba hamerenana ilay saikinosy ho eo ambany fiadidiany. Avy eo, noho ny fifanarahana tao Camp David, teo ambany fiahian'i Etazonia, tamin'ny 1979, neken'i Israëly ny namerina an'i Sinaï tamin-dry zareo Ejiptiana .
Tato anatin'ny taona vitsy dia maro tamin'ireo toerana ara-pizahantany tao amin'ity faritra ity koa no niharam-panafihana. Ny Oktobra 2004, nahafatesana olona am-polony ireo fipoahana telo nahavoa toerana telo samihafa falehan'ireo mpizahatany , izay ny ankamaroany dia Israeliana. Telo volana teo ho eo taorian'izay, baomba maro no nipoaka tao Sharm El-Sheikh, toerana iray tena ankafizin'ny olona any amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Mena, nahafatesana 88 tamin'ireo mpizahatany. Ny Avrily tamin'ny taona taorian'io indray dia sivily 23 no maty nipoahan'ny baomba tao  Dahab.
Ny Economist, tao anaty lahatsoratra iray navoaka tamin'ny 2010 , dia manipika ny vokatry ny andianà fisamborana tsy nisy fanavahana nataon'ny governemanta ejiptiana, tamin'ny fotoana nisian'ireo fanafihana tamin'ny baomba nitranga tamin'ny 2004-2005. Vinavinaina ho 3.000 ireo olona voasambotra tamin'izany, ny sasany notazonina am-ponja tsy nisy fanamelohana. “Niteraka fihetsehampo feno alahelo sy hatezerana tsy hay kosehana ny herisetran'ny polisy tamin'ireny hetsika ireny, niafàra taminà fipoahana fitokonana tampoka, hetsi-panoherana sy fanafihna nitsitaitaika tamin'ireo tranoben'ny governemanta, tany ampiadohan'ity taona ity [tamin'ny 2010, NDLR]”.
Raha ny marina dia efa am-polo taona maro i Sinaï no niaritra endrika fisamahana tamin'ireo rehetra mitambatra amin'i Ejipta. Araka ny tatitra iray avy amin'ny fikambanana – Crisis Group – misoroka ny fifandirana erantany izay navoaka ho fantatry ny maro tamin'ny 2007  [rohy tsy mety nidirana, NDLR], “efa ela i Sinaï, raha ny filazana tsaratsara kokoa, no faritra voafatotra amin'ny antsasany, tsy mbola voafaritra mazava tsara na ny maha-ejiptiana azy aza.” Resahan'ilay tatitra avy eo ny tsy fahampian'ny firotsahan'ny governemanta ejiptiana amin'ny fampandrosoana ilay saikinosy:
Tsy notadiavin'ny governemanta mihitsy ny handrafetana fandaharanasa lavitra ezaka mamaly ny filàn'ireo vahoaka Sinaï ka handraisana azy ireny sy hampandraisana anjara mavitrika azy ireo [ . . . ] Kely no mba vitan'ny governemanta, na azo lazain ho tsy nisy, mba handrisihana ny fandraisana anjara avy amin'ireo mponina ao Sinaï amin'ny fiainana politikan'ny firenena. “Nozarazarainy hanjakany”, ao anatin'ny tetikady hahafahana manao ireo solotenam-panjakana vitsy avy ao an-toerana ho toy ny saribakoly; ny lova goavana amin'ny fampivangongoana fahefaàna no nomeny vàhana manoloana ireo fomban-drazan'ny Bédouins ao Sinaï.
Tamin'ny Aprily, nokianin'i Wael Abbas ny fanaovana tsinontsinona tohizan'ny governemanta ataony an'ireo fitakiana sy filàn'ny mponina ao Sinaï : tamin'ny fibitsihana tamin-keso momba ny andro tsy fiasàna natokana ho an'ny Androm-panafahana an'i Sinaï, izay nankalazàna ny fisintahana tanterak'ireo andian-tafika israeliana niala tao aminìilay saikinosy.
— Wael Abbas (@waelabbas) 24 avril 2014  [AR]
Nanomboka napetraky ny tafika ejiptiana ny faritra iray tsy azo itsàhana manamorona ny sisintany iraisany amin'i Gaza , tamin'ny fandravàna trano an-jatony sy nanerena fianakaviana 1000 mahery handao ilay faritra, taorian'ny 24 Oktobra nanafihan'ny ABM  ka nahafaty miaramila maherin'ny 30.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/14/67537/
 Mohamed Sabry: https://twitter.com/muhamedsabry/status/561192639522172928
 fanambaràna iray nalefa ho an'ny besinimaro taorian'ireo fanafihana: https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/608358699295116
 Nohafohezin'i Abdel Fattah el-Sisi ny fitsidihana noho ny vovonamben'ny Firaisambe Afrikana nalehany tao Etiopia: http://www.reuters.com/article/2015/01/30/us-egypt-violence-sinai-idUSKBN0L22J920150130
 fanambaràna iray avy amin'ny CSFA: https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/608892599241726
 kabariny nalefa fahitalavitra: http://www.nytimes.com/2015/02/01/world/middleeast/sisi-blames-muslim-brotherhood-for-bombings-in-sinai.html?_r=0
 fanaovana ankasomparana ny fantsona mpitondra entona mampitohy an'i Israely sy Ejipta: http://www.dailynewsegypt.com/2012/07/26/supporters-of-jerusalem-claim-responsibility-for-latest-pipeline-bombing/
 fanafihana ireo andian-tafika Israeliana mitoby any amin'ny sisintany: http://www.dailynewsegypt.com/2012/09/23/egyptian-jihadist-group-claims-responsibility-for-israel-attack/
 Mpikambana niisa efatra avy amin'ny ABM avy eo no maty nandritry ny fanafihana an'habakabaka: http://www.reuters.com/article/2013/08/10/us-egypt-israel-drone-idUSBRE97902Q20130810
 eny ampanidinana ny bala afomanga: http://www.jpost.com/Defense/Eilat-hit-by-rocket-from-Sinai-as-sirens-blasts-heard-around-city-322859
 saingy tsy tanteraka nikendrena an'i Mohamed Ibrahim: http://arabic.rt.com/news/626777-_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/
 baomba tao an-tanànan'i Rafah ao amin'ny sisintany : http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/09/11/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
 nilaza ny ABM fa nanao tokim-panompoana tamin'ny EI: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/10/egyptian-jihadists-pledge-allegiance-isis
 nitatitra ny Reuters, tamin'ny Septambra, fa misy karazana fifanarahana tsy hay tsy hay izany eo amin'ny EI sy ny ABM: http://www.reuters.com/article/2014/09/05/us-egypt-islamicstate-idUSKBN0H018F20140905
 nanao bemidina iray ny tafika, namelezany ny ABM: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/49906/Egypt/Politics-/UPDATED-Egyptian-troops-strike-hard-in-North-Sinai.aspx
 tonga dia nobahanan'ny tafika tsotra izao koa ireo tolotra manome fifandraisana ho an'ny daholobe: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2014/04/09/in-egypts-sinai-peninsula-internet-blackouts-are-systematic/
 1er juillet 2014: https://twitter.com/waelabbas/status/483920268679999488
 nanao fivoriana hakàna hevitra niarahana tamin'ireo mpitarika isam-poko tao amin'ilay saikinosy izy: http://www.skynewsarabia.com/web/article/48964/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%94%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF
 in-droa i Morsi no nitsidika an'i Sinaï tao anatin'ny herinandro: http://www.skynewsarabia.com/web/article/38725/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
 toby miaramila: http://www.nytimes.com/2012/08/06/world/middleeast/gunmen-storm-egyptian-base-killing-15-soldiers.html?_r=0
 ahitàna vahoaka manodidina ny 550 000: http://www.cfr.org/egypt/egypts-sinai-peninsula-security/p32055
 im-betsaka niova tànana: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/545586/Sinai-Peninsula/284499/History
 fipoahana telo nahavoa toerana telo samihafa falehan'ireo mpizahatany: http://www.theguardian.com/world/2004/oct/08/israel.travelnews
 Telo volana teo ho eo taorian'izay, : http://www.theguardian.com/world/2005/jul/23/alqaida.terrorism
 Ny Avrily tamin'ny taona taorian'io indray dia sivily 23 no maty nipoahan'ny baomba tao: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4940506.stm
 lahatsoratra iray navoaka tamin'ny 2010: http://www.economist.com/node/16750107
 navoaka ho fantatry ny maro tamin'ny 2007: http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/egypt/061-egypts-sinai-question.aspx
 24 avril 2014: https://twitter.com/waelabbas/status/459340291947130880
 ny faritra iray tsy azo itsàhana manamorona ny sisintany iraisany amin'i Gaza: http://www.amnesty.org/en/news/egypt-end-wave-home-demolitions-forced-evictions-sinai-amid-media-blackout-2014-11-27
 24 Oktobra nanafihan'ny ABM: http://www.dailynewsegypt.com/2014/11/15/ansar-beit-al-maqdis-claim-deadly-sinai-attack/